Nippon Paint ရှယ်ယာအများစု စင်ကာပူဘီလျံနာသူဌေးကြီးGoh ဝယ်ယူသိမ်းပိုက် | Myanmar Builders Guide - Best Building and Construction guide in myanmar
Nippon Paint ရှယ်ယာအများစု စင်ကာပူဘီလျံနာသူဌေးကြီးGoh ဝယ်ယူသိမ်းပိုက်
စင်ကာပူဘီလျံနာသူဌေးကြီး Goh Cheng Liang က Nippon Paint ရဲ့ ရှယ်ယာအများစုကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီး Nippon Paint ကို ချုပ်ကိုင်ထားသူအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အခုလို ဝယ်ယူသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အတွက် မိသားစုပိုင် သုတ်ဆေးလုပ်ငန်းကြီးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလျံ ကြွယ်ဝမှု တိုးသွားပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တုန်းက စင်ကာပူ သုတ်ဆေးလောကရဲ့ ထိပ်သီးလုပ်ငန်းရှင် မိသားစုမှ သားဖြစ်သူ Goh Cheng Liang က ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သုတ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မြော်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခု သူ့ရည်မှန်းချက် ပြည့်ဝသွားပြီဖြစ်ပြီး မိသားစုရဲ့ ကြွယ်ဝမှုကို ပိုချမ်းသာသွားစေပါတယ်။
Goh Cheng Liang ရဲ့ Wuthelam Holdings Pte. က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံဖြင့် Nippon Paint Holdings Co. ရဲ့ ရှယ်ယာအများစုကို ဝယ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဝယ်ယူခင်က မိသားစုရဲ့ ကြွယ်ဝမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလျံ ရှိခဲ့ပြီး ဝယ်ယူပြီးချိန်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလျံ ဖြစ်လာပါတယ်လို့ Bloomberg Billionaires Index အရ သိရပါတယ်။
Wuthelam နဲ့ Nippon Paint တို့ဟာ သုတ်ဆေးလောကမှာ ပြိုင်ဘက်များအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုကြဘဲ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ မလေးရှား အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများအဖြစ်ဖြင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လမှာ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကို Nippon Paint က ဝယ်ယူဖို့ Wuthelam က သဘောတူတဲ့အပြင် အင်ဒိုနီးရှားမှာ Wuthelam မှ အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကိုလည်း Nippon Paint ဝယ်ယူသိမ်းပိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို Wuthelam မှ သဘောတူလိုက်လျောခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် အပြန်အလှန်အားဖြင့် Nippon Paint ရဲ့ အစုရှယ်ယာ ၅၈% ကို Wuthelam က ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းကို Nippon Paint က သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
Wuthelam Holdings Pte. မိသားစုမှ ဖခင်ကြီး Goh ဟာ ယခုအခါ အသက် ၉၄ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်ဆေးလုပ်ငန်းကို သူက ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ တပ်စွဲထားတဲ့ ဗြိတိသျှစစ်တပ်မှ ပိုလျှံနေလို့ လေလံပစ်တဲ့ သုတ်ဆေးစည်ပိုင်းတွေကို လေလံဆွဲပြီး ဆေးပုံးတွေထဲ ပြန်ထည့်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Pigeon တံဆိပ်ကပ်ပြီး ပြန်ရောင်းချခဲ့တယ်။ အရောင်အမျိုးမျိုး ဆေးစပ်ပြီးတော့လည်း ရောင်းတယ်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ Nippon Paint နဲ့ စတင်လက်တွဲခဲ့တယ်။ စင်ကာပူမှာ Nippon Paint ရဲ့ သုတ်ဆေးတွေ ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်တယ်။ စင်ကာပူအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးကိုယ်စားလှည်အဖြစ် လုပ်ကိုင်တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း ထူထောင်ခဲ့ပြီး Nippon Paint South-East Asia Group, (Nipsea) လို့ အမည်ပေးထားကြတယ်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းမှာ ဖခင်ကြီး Goh အနားယူခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူ Goh က လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ဦးဆောင်ပေးတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ သားGoh က Nippon Paint ကို သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းများ လေ့လာခဲ့တဲ့အပြင် အရောင်းအဝယ်အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ရလဒ်အဖြစ် Nippon Paint မှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ဖြစ်မယ့် မဟာဗျူဟာကျကျ ပေါင်းစည်းခြင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း Nippon Paint ရဲ့ ရှယ်ယာအများစုကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Goh ဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခဲ့တာ မနှစ်ကအထိ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ဆီက အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် သရဖူကို ရယူသွားသူက တရုတ်နိုင်ငံဖွား Li Xiting ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. ရဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံသား ခံယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလမှာ သူ့ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ အသက်ရှူစက်တွေ လက်မလည်အောင် ရောင်းချခဲ့ရပြီး စင်ကာပူမှာ နေ့ချင်းညချင်း အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူ့အသားတင်တန်ဖိုးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလျံ ဖြစ်ကြောင်း Bloomberg Billionaires Index အရ သိရပါတယ်။
Global Read 296 times